Nwụnye ikuku, nkwụnye na gwuo egwu
Ogologo nchọpụta ihe ruru mita 40 ogologo.
Mgbochi ọkụ intererence
Ogologo ndụ ka mma maka afọ 1-5
Ngosipụta LCD ka ịlele data ngwa ngwa
Ụlọ ahịa yinye kwesịrị ekwesị, njikwa obibi
OEM na ODM, API na Protocol dị
Nke a bụ a ikuku ndị mmadụ counter nke nwere ike ibunye na-enweghị WIFI, ọtụtụ n'ime anyị ndị mmadụ counters bụ ngwaahịa ikike ikike. Iji zere mpụ, anyị etinyeghị ọtụtụ ọdịnaya na webụsaịtị. Ị nwere ike ịkpọtụrụ ndị ọrụ ahịa anyị ka ha zitere gị ozi zuru ezu gbasara counter ndị mmadụ.
N'oge nnukwu data, Ndị mmadụ counterna-eme ka data dịkwuo mma ma na-eme ka azụmahịa dị mfe. Infrared ndị mmadụ counter dabara maka ọba akwụkwọ, ọdụ ụgbọ oloko dị elu, ụlọ ahịa ekwentị, ahịa talent, ụlọ ahịa azụmaahịa, ụlọ ọrụ gọọmentị, nnukwu ụlọ ahịa, agbụ uwe, N'ọdụ ụgbọ elu, ụlọ ihe ngosi nka sayensị na teknụzụ na ebe ndị ọzọ, n'adịghị ka axis. ndị mmadụ counter, nke ndị mmadụ counternke MRB bụ naanị ọkara nke kaadị kredit. Ọ dị oke mma ịwụnye, na-agụta ụzọ abụọ, na-eji ọgụgụ isi na-amata ntụziaka nke ntinye na ọpụpụ ndị ọrụ, na nrụnye anaghị achọ wiring ọ bụla. Ọnụ ụzọ nchọpụta kachasị dị mita 40 n'obosara, nnyefe data ikuku, na ebe nnyefe ikuku dị ogologo karịa nke rawụta ikuku.Ndị mmadụ counter na-eji batrị lithium-ion maka ọkụ ọkụ, nke nwere ike ịdịru ihe dị ka afọ 2, nke dịkwa iche na ya axis ndị mmadụ counter.
Uru ngwaahịa nke MRB Infrared people counter
1. Nhazi nke ndị mmadụ counterdị mfe na-emesapụ aka. Ọdịdị ọdịdị nke counter ọhụrụ ahụ dị nkenke, ntinye nkedo, nkwado nkwado.
2. Ogologo ndụ batrị, ndị mmadụ counter ndụ batrị nwere ike iru otu afọ na ọkara, 3.6V nnukwu batrị lithium batrị, voltaji 1.5-3.6V, iji AA (No. 5), mma mgbanwe.
3. Dịkwuo LCD ngosi na ndị mmadụ infrared counter, data n'ime na pụta doro anya na nlele, ma ị nwere ike ịhụ nke ọma.
4. Data nnyefe nke ndị mmadụ counterkwụsiri ike. Ihe data a na-ebufe site na ọnụ ọgụgụ ndị njem na-agafe na onye nata data bụ data ezoro ezo, nke na-adịghị egbochi ngwaọrụ ndị ọzọ ma dị nchebe karị.
5. Gbochie nnyonye anya nke ìhè na ndị mmadụ counter n'ụzọ dị irè karị, ma dozie njehie ngụta nke mgbanwe nke ìhè ambient kpatara.
6. Real-oge mmepụta data site LED mgbasa ozi ihuenyo na anyị ndị mmadụ infrared counter, na ọnụ ọgụgụ data nwere ike chepụta na LED mgbasa ozi ihuenyo site na protocol iji software maka ozugbo nlekota oru.
7. MRB Ndị mmadụ counter Nwere ike banye n'ime iko ka ọ rụọ ọrụ nke ọma na-enweghị nnyonye anya site na ọnụ ụzọ enyo na windo
8. Ozugbo infrared ụzarị na-abata nke Ndị mmadụ counter Ndị mmadụ ma ọ bụ ihe na-egbochi ihe karịrị 5 sekọnd, ihe ngosi ahụ ga-egosi ụkpụrụ egbochiri, na ọkụ LED dị n'etiti RX ga-egbuke egbuke iji gosi na enwere ihe mgbochi, a ga-akọkwa data ahụ na onye nata data. A ga-enwekwa ndekọ na ndụmọdụ ndị metụtara ya na ngwanrọ nkendị mmadụ counter.
9.Satisfy dị iche iche ahaziri chọrọ, ndị ahịa LOGO nwere ike ịgbakwunye na ndị mmadụ counter ahụ ma ọ bụ igbe onyinye.
10.MRB ndị mmadụ counter Ebe dị anya: ruo 1-40 mita nrụnye ogologo oge.
11. Nke a ndị mmadụ counter enwere ike iji ya mee ihe maka njikwa obibi site na ngwanrọ
Izugbe Ndị mmadụ counter
Ịnye ọkụ 1.5v/3.6v AA ma ọ bụ batrị lithium maka sensọ; Adaptor/USB kwadoro maka DC
Akụkụ 2.5 x 2.3 x 0.98"
Okpomọkụ na-arụ ọrụ -10 ~ 40 ℃
Agba Ọcha, ma ọ bụ ahaziri
Nwụnye Ụdị ụlọ ahịa niile, ọbá akwụkwọ, ebe ngosi nka, ụlọ ọgwụ, ụlọ akwụkwọ
Na-arụ ọrụ ugbu a maka onye nnata (RX) 180μA
Ọnọdụ steeti Static ugbu a maka onye nnata (RX) 70μA
Na-arụ ọrụ ugbu a maka nnyefe (TX) 200μA
Steeti Static dị ugbu a maka nnyefe (TX) 80μA
Ụzọ nchọpụta Ụzarị infrared
Ụzọ agụta Gbaa ozugbo na ndò wee gụọ
Oge nnyefe data Nkeji 5 site na RX ruo DC - ahaziri; Ngwa ngwa - DC gaa na ngwanrọ
Ugboro nbufe RF 433MHz, ezoro ezo
Ụzọ Njikọ RX ruo DC site na RF Nyefee, DC na kọmputa site na eriri USB;
Akụrụngwa kwụụrụ onwe ya Maka ụlọ ahịa mgbama, n'elu windows 2003
Ngwa netwọkụ Maka ụlọ ahịa agbụ, n'elu windo 2003 na SQL2005 na-eje ozi.
Ogologo 1.2mita, ihu na ihu
Obosara ≤20 mita
Ụzọ edoziri Skru ma ọ bụ ihe mmado
Oke sitere na Sensọ ruo DC ≤40 mita
HPC005 infrared People counter nwekwara ike iji dị ka ebe obibi maka ngwa njikwa obibi n'ụlọ ahịa, mpaghara ọha ma ọ bụ mpaghara njem ọha:
FAQ maka HPC005 Infrared ndị mmadụ na-agụta usoro:
1.Can I install HPC005 infrared people counter onwe m mgbe m zụtara ya na ezi ego? Nwụnye ọ dị mgbagwoju anya?
Nwụnye dị nnọọ mfe. Naanị ị ga-etinye akwụkwọ mmado ahụ n'azụ nke counter ahụ wee rapara ya na mgbidi ma ọ bụ n'elu ọzọ.
2.Gịnị ka m kwesịrị ịṅa ntị n'oge ntinye nke HPC005 IR beam counter?
Ogologo nha nha, ihu na ihu, enweghị ebe nchekwa dị n'etiti, gbalịa ka ịzere ọkụ siri ike, a ga-etinye ntụziaka ntinye na ọpụpụ n'ụzọ ziri ezi, a ga-enwekwa akara ntinye na ọpụpụ na onye nata.
3.Ọ dị mkpa ka etinyere counter infrared ndị mmadụ HPC005? Ma ọ bụ batrị? Kedu ụdị batrị ọ bụ?
Ọ nwere ike ịrụ ọrụ na-enweghị nkwụnye. Ọ nwere ike iji 1.5V ~ 3.6V AA batrị. N'ikwu okwu n'ozuzu, enwere ike iji ya maka afọ 1 ruo 3. Ọ dabere na oke okporo ụzọ mmadụ na ugboro ole a na-ebugo data na sava ahụ.
4.Enwere m ike ịlele data na-abata na nke na-apụ apụ nke HPC005 infrared trafic counter n'ebe ọ bụla?
Ee, anyị na-enye ngwanrọ dị n'ịntanetị yana ngwanrọ kwụ ọtọ. A ga-ebugo data ahụ na ihe nkesa ozugbo ma jikọta ya. Ị nwere ike jụọ ajụjụ counter ma ọ bụ ozi nchịkọta nke ụlọ ahịa ọ bụla ebe ọ bụla.
5.What bụ izi ezi nke HPC005 infrared beam counter?
Ọ bụrụ na enweghị nnyonye anya ọkụ siri ike na ntinye ziri ezi, izi ezi nwere ike iru karịa 90%, na ọbụna karịa 95% na gburugburu ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Agbanyeghị, n'ikwu okwu n'ozuzu, gburugburu ebe nrụnye onye ahịa dị mgbagwoju anya. Ekwesịrị imezi nke a dabere na saịtị nrụnye n'ezie iji nweta izi ezi kachasị elu enwere ike.
6.I nwere ERP ma ọ bụ ngwanrọ ọzọ. Achọrọ m ijikọ na counter infrared HPC005 gị, ka m wee jiri ngwanrọ nke m gụọ data nke akụrụngwa gị ozugbo,bụ na OK?
Dị ka ihe karịrị 15 afọ People counter emeputa soplaya, anyị na-arụ ọrụ na nke a ruo ọtụtụ afọ maka ndị ahịa conveniences, Ee, anyị na-enye protocol na API. Ị nwere ike ịrụ ọrụ dịka mkpali anyị siri dị. Mgbe njikọ ahụ gachara, ị nwere ike iji ngwanrọ nke gị ka ịlele data dị n'azụ.
7.Ogologo oge ole ka ngwaahịa gị na-enye ọrụ ikike site n'aka ndị nrụpụta?
N'ikwu okwu n'ozuzu, anyị na-enye ọrụ akwụkwọ ikike afọ 2. Maka ndị na-ere ahịa anyị, anyị na-enye ọrụ ikike afọ 3-5. Ndị na-ere ahịa n'ụwa niile na-anabata ịkpọtụrụ anyị ijikọ ọnụ nyochaa ahịa ahụ. Anyị na gị na-arụ ọrụ zuru oke nke ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ dị elu iji nweta oke ahịa mpaghara.
HPC005 ikuku ndị mmadụ na-emegide vidiyo
Ọ bụrụ na ị nwere mkpa agụta ndị ọzọ, anyị, dị ka ndị ọkachamara na-emepụta ihe na ndị na-ebubata ihe, anyị nwere ike ịnye gị ọnụ ahịa dị iche iche na ọnụ ahịa dị mma,
dị ka ịgụta ụgbọ ala, anyị nwere ọnụ ọgụgụ ụgbọ ala,
na-agụ ndị njem, anyị nwere counter ndị njem,
na-agụta anụmanụ, anyị nwere AI counters, wdg.
na n'ihe gbasara teknụzụ, anyị nwere 2D, 3D, AI, IR, wdg.
A na-anabata iwu OEM na ODM n'oge ọ bụla.
Nke gara aga: Ndị mmadụ dijitalụ ikuku MRB na-emegide HPC005U
Osote: MRB Occupancy counter HPC usoro
beam ndị mmadụ counter
Ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ infrared
Ndị mmadụ IR counter
Ndị mmadụ Counter
Ndị mmadụ na-agụta
Wifi ndị mmadụ Counter
Ikuku ndị mmadụ Counter
ikuku ndị mmadụ na-agụta
Sistemụ ọnụ ọgụgụ ikuku